scheduleबुधवार फाल्गुन १४ गते, २०७६
एजेन्सी । फ्रान्स युरोप मात्रै नभएर विश्वकै एक शक्तिशाली राष्ट्र हो । फ्रान्सको बारेमा सामान्य जानकारी त हामी सबैलाई छ नै । तर, के तपाईं फ्रान्सबारे यस्ता तथ्यहरु जान्नुहुन्छ ? जुन साँच्चै अचम्मित पार्ने खालका छन् ।
आउनुस्, हामी तपाईंलाई फ्रान्सका अनौठा १० तथ्यबारे जानकारी दिन्छौँ ।
फ्रान्सेलीहरुलाई चिप्लेकिरा यति मिठो लाग्छ कि त्यसको कुनै सीमा नै छैन । फ्रान्समा बर्सेनि करिब ३० हजार टन चिप्लेकिरा खपत हुन्छ । त्यसको एक तिहाई फ्रान्समा नै उत्पादन हुन्छ भने बाँकी दुई तिहाई बाहिरबाट आयात गरिन्छ ।
एकमात्र बस स्टप साइन
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा बस स्टप साइन एकमात्र छ । यहाँ सवारीहरु प्राथमिकताको आधारमा चल्छन् । चोक पार गर्ने क्रममा जुन गाडी दायाँबाट आएको हुन्छ, उसले पहिले मौका पाउँछ ।
फ्रान्सको स्पेशल बगेट ब्रेड निकै नै खास रेसिपीबाट बन्छ । यसमा गहुँको पिठो, Yeast र नुनबाहेक केही मिसाइएको हुँदैन ।
ढाल्नु पर्ने थियो आइफिल टावर
फ्रान्सको पहिचान नै बनेको आइफिल टावर सन १८८९ मा गुस्ताव आइफिलले बनाएका थिए । फ्रान्सेली क्रान्तिको सम्झनामा यो टावर बनाइएको हो । टावर बनाउँदा २० वर्षपछि यसलाई भत्काउने योजना थियो । तर, यसको लोकप्रियता निकै बढेपछि ढालिएन । जुन आजसम्म पनि छ ।
सबैभन्दा छोटो सडक
पेरिसमा एक सडक छ, जसको नाम ‘रुए दि डेगरेस’ हो । यसको लम्बाइ कुल ५.७५ मिटरमात्रै छ । सम्भवत: यो नै विश्वको सबैभन्दा छोटो सडक हो ।
किस गर्न प्रतिबन्ध
फ्रान्सको पेरोन स्टेशनमा किस गर्न प्रतिबन्ध छ । यात्रुहरु आफूलाई विदाइ गर्न आएका व्यक्तिसँग छुट्नुअघि लामो समयसम्म किस गर्न थाल्ने गर्थे, जसका कारण रेल छुट्न नै ढिला हुन्थ्यो । सोही कारण सन १९१० देखि नै यहाँ किस गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
सबैभन्दा बढी नोवेल विजेता
फ्रान्सका १५ लेखकले साहित्यतर्फको नोवेल पुरस्कार जितिसकेका छन् । यो अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो । यसपछि ब्रिटेन र अमेरिकाका १०-१० लेखकले नोवेल पुरस्कार जितेका छन् ।
सबैभन्दा लोकप्रिय म्यूजियम
मोनालिसाको घर लूव्र म्यूजियम संसारकै सबैभन्दा लोकप्रिय म्यूजियम मानिन्छ । यहाँ बर्सेनि सबैभन्दा धेरै पर्यटक पुग्छन् । सन २०१५ मा यो संख्या ८७ लाख थियो ।
इंग्लिशको जननी नै मानिने बेलायतमा पनि कुनै समय राष्ट्रभाषा फ्रेन्च थियो । सन १०६६ देखि १३६२ सम्म बेलायतको राष्ट्रभाषा नै फ्रेन्च रहेको इतिहास छ । अहिले विश्वभर अंग्रेजीले हस्तक्षेपकारी उपस्थिति जनाएपनि फ्रान्समा फ्रेन्चको जादू कायमै छ ।
फ्रान्समा यस्तो व्यक्तिसँग पनि विवाह गर्ने इजाजत छ, जो पहिले नै मरिसकेको होस् । फ्रान्सेली कानुनले मरणोपरान्त विवाहका लागि अनुमति दिएको छ । त्यसका लागि मर्ने व्यक्ति आफूसँग विवाह गर्न चाहन्थ्यो भन्ने कुराको पुष्टि भने गर्नुपर्छ ।
गर्मी र जाडो दुवै मौसममा फाइदाजनक ज्वानो
यौन सम्पर्कपछि पुरुष किन निदाउँछन् ?
‘इन्टेलिजेन्ट मानिसले अरुलाई सराप्ने, कसम खाने र नाङ्गै हिड्ने गर्छन्’
काँक्रो नियमित रुपमा खाने गर्नाले क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ
यी १० कारण जसले तपाईलाई असफल बनाउँछ
दैनिक कसरतका फाइदाः बुढ्यौली ढिला गर्नेदेखि आयु बढाउनेसम्म
आँखामुनि कालो धब्बा किन देखिन्छ ?
औषधीको प्रयोग गरिरहनु भएको छ ? यी फलफूलको जुस नखानुहोस्
जन्मबार अनुसार फरक पर्नसक्छ मानिसको स्वभाव, थाहा पाउनुहोस् केही तथ्यहरू
यी पाँच कारणले परपुरुषसँग अवैध सम्बन्ध राख्छन् महिलाहरु
जन्ममितिको आधारमा आफ्नो भाग्य आफै हेर्नुहोस्
तपाईंका लागि कुन राशीसँगको प्रेम राम्रो ? हेर्नुस्, १२ वटै राशीबीचको अन्तरसम्बन्ध !
अंग्रेजी बोल्नेक्रममा धेरैले गर्छन् यी ८ गल्ती !
बिनाकारण बारम्बार डकार आउनु चिन्ताजनक समस्या
पुरुषले सुधार्नै पर्ने यी सात बानी
तपाईंलाई थाहा छ बिल गेट्सका यस्ता सौखबारे
तपाईको उमेरभन्दा १० वर्ष कम देखिन चाहनुहुन्छ, यसो गर्नुहोस्
श्रीमती रिसाएर हैरान पर्नुभएको छ, यसो गर्नुहोस्
गहना किन्दै हुनुहुन्छ भने होसियार ! यस्ता छन् नक्कली सुन पहिचान गर्ने तरिकाहरु
प्रचण्ड नै चाहन्छन्- सूर्य यसरी नै छताछुल्ल भइरहून् !
काठमाडौं, १४ फागुन । ‘जंगलमा भूमिगत भएर, सेना प्रहरीले नदेख्ने ठाउँमा बसेर गणतन्त्रका धेरै कुरा गरिहोला के । माघ १९ पछि हामीले...
उप-स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि …
तेहरान, १३ फागुन । इरानमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जटिल बन्दै गएको इरानी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । इरानका...
इटालीमा कोरोना भाइरसका कारण ११ जनाको मृत्यु, युरोपभर त्रास
काठमाडौँ, १४ फाल्गुन । इटालीमा नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बुधबार बिहानसम्म ११ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले...
सुजाता कोइराला नेपाल छाडेर विदेश जाने तयारीमा !
काठमाडौँ, १४ फाल्गुन । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला नेपाल छाडेर विदेश जाने तयारीमा...
नारायणकाजी भन्छन्- गुटका आधारमा भविष्यमा देख्न छाडौं
कास्की, १३ फागुन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले...
मध्यपूर्वमा कोरोना भाइरसः बहराइनका शैक्षिक संस्था २ हप्तासम्म बन्द
एजेन्सी, १४ फाल्गुन । बहराइनका निजी तथा सरकारीसहित सबै शैक्षिक संस्थाहरू २ हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ । मध्यपूर्वमा कोरोना...